literature – Pahilo Page
घोडदौराको पहाडमा भेटिए १७ कविता र ५ वटा गीत
दाङ । जिल्लाको ‘घोडदौराको पहाडमा १७ कविता र ५ गीत’ भेटिएका छन् । तीन वर्षदेखि दाङमा फरक फरक शैलीमा साहित्यिक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको उदाहरण समूहले यसपटक “घोडदौराको पहाडमा १७ कविता र ५ गीत” नामक कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमका लागि घोराही र तुलसीपुरका साहित्य तथा गीत संगीतको क्षेत्रमा लागेका युवाहरु
भानु जयन्तीमा क्षितिज अभिनन्दित हुने, पुरणलाई बधाई
रोल्पा । ललित साहित्य परिषद्, रोल्पाले भानुजयन्तीको अवसरमा साहित्यकार क्षितिज मगरलाई अभिनन्दन गर्ने भएको छ । भानुयन्तीको अवसरमा असार २९ गते लिबाङमा हुने कार्यक्रममा मगरलाई सम्मान गरिने परिषद्का अध्यक्ष लोक आलोकले जानकारी दिए । परिषद्को शनिबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । परिषद्ले २०६० सालदेखि रोल्पा जिल्लाको साहित्यिक उन्नयनमा
ओमानमा उपन्यास “भुमरी”को चर्चा र स्रष्टाहरु सम्मानित
मस्कट (ओमान) । अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज ओमान च्याप्टरले एक समारोहको आयोजना गरी पत्रकार तथा लेखक बसन्त नेपालको नयाँ कृति “भुमरी” उपन्यासमाथि परिचर्चा गरेको छ । परिचर्चा कार्यक्रममै विभिन्न विधाका स्रष्टाहरुलाई सम्मानित पनि गरिएको छ । समाजका अध्यक्ष दिलप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता र सुशील पुन बिरहीको सञ्चालनमा अघि बढेको समारोहका प्रमुख अतिथि
लोकार्पण हुँदैछ एघार स्रष्टाको जियालो महाकाव्य
दाङ । एघारजना कविहरुद्वारा लेखिएको जियालो महाकाव्यको शनिबार घोराहीमा लोकार्पण हुने भएको छ । राप्ती साहित्य परिषदसहित जिल्लामा क्रियाशील सबै साहित्यिक संघ संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा उक्त महाकाव्यको लोकार्पण गर्न लागिएको हो । दाङकी कवि बुनु लामिछानेलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका ११ जना कविहरुको संयुक्त कृति जियालो महाकाव्यको विशेष समारोहका बीच लोकार्पण
गैरीगाउँमा सिर्जना संगम सुरु
रोल्पा । रोल्पाको गैरीगाउँमा साहित्यिक मासिक कार्यक्रम ‘सिर्जना संगम’ सुरु गरिएको छ । ललित साहित्य परिषद् गैरीगाउँ शाखाको आयोजनामा उक्त सिर्जना वाचन कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । गैरीगाउँको तिलाबजारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष डी.बी. टुहुराले व्यानर
नाम जतिकै सुन्दर छैन रुपमतीको कथा । तपाई हिड्ने पिच सडकमा रुपमती कुप्रो शरीर हल्लाउँदै शरीरको धुलो टकटकयाइरहेकी हुन सक्छिन् । घर कता हो भनी तपाईले सोध्दा — आकाशलाई छानो धर्तीको माटोलाई घर बताउन सक्छिन् । जवाफ सुन्दा बहुलाही ठानेर तपाईका दुई ओंठ चल्मलाउन सक्छन् । ओठको के भर ?
बुढामगरले सुनाइन् रचना
रोल्पा । स्रष्टा भगवती बुढामगरले शनिबार लिबाङमा एकल रचना वाचन गरिन् । ललित साहित्य परिषद्ले द्वैमासिक रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको एकल रचना वाचनमा बुढामगरले आफ्ना रचनाहरु सुनाएकी हुन् । शनिबार सम्पन्न भएको २८ औं एकल रचना वाचन हो । कार्यक्रममा बुढामगरले ६ वटा कविता, २ वटा गजल र एउटा छोटो
साहित्यकार पुरण क्षेत्रीको एकल रचना वाचन हुने
रोल्पा । साहित्यकार पुरण क्षेत्रीले रोल्पामा एकल रचना वाचन गर्ने भएका छन् । ललित साहित्य परिषद्को हालै बसेको बैठकले यही कात्तिक २७ गते लिबाङमा क्षेत्रीको एकल रचना वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । लिबाङ निबासी कवि क्षेत्रीका ‘जलजलाको नूतन सन्देश’ र ‘देशले हाम्रो उत्साह खोजिरहेछ’ कविता संग्रह प्रकाशित छन् ।
लेखक न्यौपानेसँग “कर्म : सिकाइमा गहिरिएको खाङल”बारे अन्तरक्रिया
काठमाडौँ । सीतापाइलास्थित नागार्जुन कम्युनिकेसन स्टेसनरी एण्ड सप्लायर प्रालिले कर्मःसिकाइमा गहिरिएको खाडल पुस्तकका लेखक दामोदर न्यौपानेसँग शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । समारोहमा पाठकहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै लेखक न्यौपानेले शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा सीमित नभई विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा स्थानीय ग्रिनफिल्ड नेसनल कलेजका प्रिन्सिपल खडक बस्नेत,
प्रिय थबाङ ! कस्तो छ तिमीलाई ?
प्रिय थबाङ ! कस्तो छ तिमीलाई ? जुन दिन रक्तिम सपनाहरूमा बगरेहरूले, औंसीको चुक घोप्टाइदिए त्यस दिनदेखि बिसन्चो छ मलाई । प्रिय थबाङ ! आस्थाको सगरमाथा सधैं सतिसालझै उभिइरहने क्रान्तिको तुफानी केन्द्र मलाई साच्चै भनिदेऊ न यस घडी कस्तो छ तिमीलाई ? म त यस घडी माउ हराएको चल्ला भएँ
विदेशको सपना र वास्तविकता
मध्यपुर्वको शक्तिशाली अनि समृद्ध रास्ट्र कुवेत दुई बर्ष बसेर फर्किदै गर्दा कुवेतको इमिग्रेसन पार गरेर हवाइजहाजमा चढ्ने बित्तिकै मैले निकै गहिरो श्वास फेरे।स्वतन्त्रता अनि उन्मुक्तिको आभासले मन प्रफुल्ल भयो। धेरै पछि मान्छे हुनुको बोध गर्न पाउँदा मन हर्षले गदगद हुदो रहेछ, हो त्यस्तैभयो मलाई । २०१४/०६/२१ तारिखमा कुवेत बिमानस्थलमा अवतरण
‘हेल्लो मिस्टर पत्रकार ? फोटो हामी पनि खीचौंन” अपरिचित युवतीको अप्रत्यासित आग्रहमा ‘हस्स’ भन्दै उनको समिप पुगे्र लेन्स मिलाउदै उनको रुपको आकृतिलाई क्यामेरामा कैद गर्दै थिए, फेरी बोलिन ‘सेल्फी प्लिज’१ म छेउमै गए्र उनीले आफ्नो सेलफोन खोलिन्र म संगै चिप्किएर अनुहार बिगार्दै हातको दुई औला ठड्याउदै पाँचपोज जति ‘सेल्फी’ लिइन् ्र
छोराले गरिदिने बुवाको ‘कुखुरी’ सार्वजनिक
रोल्पा । लोकेन्द्र सेन ‘सिम्पल कान्छा’को ‘कुखुरी’ मुक्तकसङ्ग्रह सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान, रोल्पा शाखाले बिहीबार रोल्पाको लिबाङमा एक कार्यक्रमको गरी उक्त सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिष्ठानका रोल्पा शाखा सचिव समेत रहेका सेनको छोरा लालेन्द्र सेनको जन्मदिनको अवसर पारी उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा साहित्यकार
साहित्यकार गोकर्णले सुनाए आफ्ना रचनाहरू
रोल्पा । साहित्यकार गोकर्ण पुनमगरको शनिबार लिबाङमा एकल रचना वाचन गरेका छन् । ललित साहित्य परिषद्ले आयोजना गर्दै आएको ‘एकल रचना वाचन’ कार्यक्रमको २६ औं श्रृंखलामा उनले आफ्ना २ दर्जन कविताहरु सुनाएका हुन् । कविताबाट रचना वाचन गरेका पुनमगरले गजल, मुक्तक र गीतहरु सुनाएका थिए । उनले ८ वटा कविता,